Rooble oo Warbixin siiyay Golaha Amniga ee QM | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo Warbixin siiyay Golaha Amniga ee QM
MUQDIHSO, Soomaaliya - Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Shir ka yeeshay arrimaha Soomaaliya, shirkaasi oo ahaa mid Golaha Ammaanka xog lagaga siinayey hawlgallada Qaramada Midoobay ee UNSOM iyo hawlgalka AMISOM ee Midowga Afrika.
Shirka waxaa ka hadlay labada ergay ee Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika James Swan iyo Francisco Madeira oo labaduba ka hadlay kaalinta ay kaga jiraan taageeridda geeddi-socodka xasilinta iyo dawladnimada Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo Shirka ka hadlay ayaa warbixin ka bixiyay heshiiskii ay gaareen madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada Soomaaliya, waxa uu sheegay inay Soomaaliya ka go’antahay qabashada doorashada baarlamaanka dabayaqaada sannadkan, iyo doorashada hoggaanka horraanta sannadka soo socda.
Rooble ayaa Golaha Amaanka ka balanqaaday in Xukuumaddiisa ay ilaalinayso qoondada haweenka ee Baarlamaanka oo ah 30%, iyo ka qaybgalka dumarka ee heerarka kala duwan ee dawladda.
Ra'isul Wasaaraha ayaa sheegay inay dowladdu Baarlamaanka u gudbin doonto xubnaha guddiyada la dagaalanka musuq-maasuqa iyo guddiga xuquuqda aadanaha.
Khilaaf ayaa ka taagan guddiga doorashooyinka iyadoo mucaaradku dalbadeen in la bedelo dhammaantood, maadaama ay ku jiraan Saraakiil ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya iyo Shaqaalaha Dowladda.